गर्भावस्था मा Ureaplasma
घर र परिवार, गर्भावस्था
हाम्रो समय मा, एक दुर्लभ गर्भावस्था जटिलताहरू बिना जान्छ। त्यसैले, एक व्यापक शरीर को परीक्षा पूर्व एक योजना गर्भावस्था गर्न आदर्श हुनुपर्छ। गर्भावस्था मा Ureaplasma एकदम महिला बीच साधारण भएको छ। को नजन्मेको बच्चा को लागि एक रोग गम्भीर जोखिम छ, त्यसैले यसलाई गम्भीर आफ्नो उपस्थिति लिन लायक छ। सामान्यतया, कुनै पनि मानव शरीर मा कुनै हानि ल्याउन, तर गर्भावस्था को समयमा संख्या बढ्दै र बच्चाहरु को एक जोखिम poses छ जीवाणुहरू ureaplasma एउटा सानो रकम बसोबास।
गर्भावस्था को समयमा एक ureaplasma रूपमा यो रोग कसरी चिन्न? यसको लक्षण पुरुष urethritis समान छन् - urination समयमा निर्धारण श्लेम लाग्एको वर्ण, पेट दुखाइ देखिन्छन्। यी घटना सामान्यतया छोटो-बस्ने हो, र यो समय यति चाँडै पारित, यो सबै कुरा छैन जस्तो देखिन्छ। यस कारण, महिला अक्सर यी अस्थायी बेचैनी र अप्रिय लक्षण ध्यान छैन। तर wily भाइरस शरीर मा settles र शरीर कमजोर हुनेछ जब मौका लागि प्रतीक्षा। गर्भावस्था को समयमा, त्यहाँ सम्पूर्ण जीव को एक राजधानी reorganization हो, त्यसैले यसलाई धेरै रोगहरु प्रगति गर्न अनुमति दिने, शरीर गरेको प्रतिरक्षाको कमजोर। Ureaplasma अर्को एक यौन साथी बाट हस्तान्तरण र आमा बाट प्रसब समयमा बच्चा गर्न।
Ureaplasmosis शरीर को धेरै प्रणाली मा उलझन दिन्छ र पनि urogenital प्रणाली, cystitis, मेनिनजाइटिस, endometritis, मूत्राशय पत्थर, निमोनिया र अन्य संक्रमण एक समस्या रूपमा देखिन्छ। ग्रीवा क्षरण, endometritis अक्सर ureaplasma को नतिजा हो।
ureaplasma गर्भावस्था को समयमा निदान रूपमा? रोग को उपस्थिति निर्धारण गर्न एक महिला बिस्तारै थपका PCR निदान भनिन्छ यो विधि बनाउन। विशिष्ट serological परीक्षण पनि प्रयोग गरिन्छ - एक रक्त परीक्षण गरेर रोगजनक एंटीबडी पत्ता लगाउन।
Ureaplasma parvum गर्भावस्था मा हुन सक्छ गर्भपात को एक कारण, भ्रूण को गठन समयमा त्यहाँ विशेष गरी भने। रोग को पहिलो trimester मा malformations कारण सक्छ गर्भपतन। किन द्रुत चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् र सबै आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ। रोग को दोस्रो र अन्तिम trimester कारण को घटना गर्न hypoxia र पोषक कमी को विकास गर्न योगदान placental अपर्याप्तता। ureaplasma गर्भावस्था को समयमा पत्ता भने, यो बाधा छैन। अब यस रोग को उपचार को विभिन्न विधिहरू छन्, किनभने असल विचार गर्नुहोस्।
कसरी आधारमा गर्भावस्था आगम उनको जीवन र देखि, ureaplasmosis फरक व्यवहार। त्यहाँ समापन एक खतरा छ भने, उपचार तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ। तर सबै कुरा सामान्य थप वा कम छ भने, त्यसपछि उपचार पछि मिति, 30 हप्ता पछि, गर्भवती महिला को कलेजो को पहिले नै काल काम सौतेली छ अर्डर गर्न बोझ मा। उपचार जन्म नहर बच्चालाई आमा द्वारा संक्रमित छैन मार्फत खण्डमा समयमा भनेर ग्यारेन्टी हुनेछ। रिकभरी समयमा यौन गतिविधि न्यून पारिएको र दुवै साझेदार व्यवहार गर्नुपर्छ।
हाल, चिकित्सा धेरै सक्षम छ, र गर्भावस्था को समयमा ureaplasma जस्ता रोगहरु को उपचार कुनै पनि समस्या, मुख्य कुरा कारण छैन - एक योग्य चिकित्सक सल्लाह समय। एक अनुभवी विशेषज्ञ रोग हटाउन र यो शरीर बाट निकाल्नु मदत गर्नेछ भनेर सबैभन्दा innocuous दबाइहरु चयन गर्नेछ। समय एक पेशेवर हेर्न भने, गर्भावस्था विकास गर्न जारी हुनेछ। आत्म-medicate एक डाक्टर को सहायता र आवश्यक परीक्षण सामना गर्न सक्दैन पारित बिना कारण मात्र एक स्थिति आकलन र सही निर्णय गर्न सक्षम विशेषज्ञ। विशेष गरी गर्भवती महिला विशेष निगरानी आवश्यक छ।
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भावस्था को समयमा टाउको को ट्याब्लेट
के शक्ति गर्भावस्था को प्रार्थना गर्छ?
ऐंसेलु प्रसब अघि छोड्छ: बनाउन र लिन कसरी
कति हप्ता हुँदा पहिलो र पछि pregnancies बच्चा सार्न सुरु हुनेछ?
गर्भनिरोधक विधि: जन्म नियन्त्रण क्यालेन्डर विधि
भिटामिन B6: प्रयोगको लागि निर्देशन र गर्भवती महिला को शरीर मा यसको भूमिका
किन एक घर लागि वकील को एक सामान्य शक्ति?
पैकिंग बैग - बिक्री अभिन्न भाग
42 किलोमिटर र 195 मीटर को म्याराथन दौड लम्बाइमा किन?
जटिल सरल वाक्य - जटिल साधारण वाक्य उदाहरण छ ...
दबाइ बिना आफ्नो रक्तचाप कसरी कम गर्ने?
कसरी पानी मा मकै porridge पकाउन केही व्यञ्जन खाना पकाउने को Subtleties
कलवारी क्रस: फोटो, मूल्य लेबल
गुथना: शुरुआती लागि snowflakes। गुथना प्रविधी Snowflakes: सर्किट
रहस्यमय बिरालो। चार-खुट्टे मित्र कति वर्ष बाँच्ने?
बोलीको कलात्मक शैली
प्राकृतिक समुदाय को उदाहरण: समुद्र, सागर, ताल, दलदल, क्षेत्र
प्रभावकारी अभ्यास: कसरी 1 दिन को लागि हात मांसपेशीमा निर्माण गर्न